ယန် ရှင်းဟိုင် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၀၄(2004-02-14) (အသက် ၃၅)
ယန် ရှင်းဟိုင် (တရုတ်: 杨新海; ၁၉၆၈ ဇူလိုင် ၂၉ – ၂၀၀၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄) သည် ၁၉၉၉ နှင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်အကြား လူသတ်မှု ၆၇ မှုနှင့် မုဒိမ်းမှု ၂၃ မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့သောကြောင့် အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ်၌ သေဒဏ်အပြစ်ပေး အစီရင်ခံရသည့် တရုတ်ကွင်းဆက်လူသတ်သမားဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ယန် ကျစ်ယာ နှင့် ယန်လျို ဟုလည်း လူသိကြသည်။ မီဒီယာများ၌ ၎င်းအား "မိစ္ဆာကောင်လူသတ်သမား" ဟု ပုံနှိုင်းရေးသားသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်စဉ်ကစ၍ တရုတ်နိုင်ငံ၌ အကျော်စောဆုံး ကွင်းဆက်လူသတ်သမားဖြစ်သည်။
၃ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း တရားရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အဆုံးစီရင်ခြင်း
၁၉၆၈ ဇူလိုင် ၂၉ တွင် ဟဲနန်ပြည်နယ် ကျွန်းရန်ကောင်တီ၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူ၏မိသားစုမှာ ဇာတိရွာရှိ အဆင်းရဲဆုံး မိသားစုစာရင်းဝင်ဖြစ်သည်။ သားသမီး ၄ ဦးအနက် အငယ်ဆုံး ယန်သည် ထူးချွန်သော အတွင်းစွဲ (introvert) တဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၅ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်တွင် ကျောင်းမှ ထွက်ပြီး အိမ်သို့ပြန်မလာတော့ဘဲ တရုတ်နိုင်ငံအနှံ့ လှည့်လည် ကာ အလုပ်သမားအဖြစ် လုပ်ကိုင်သည်။
၁၉၈၈ နှင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်များအတွင်း ဟဲပေပြည်နယ် ရှီးအန်း ၊ ရှားအန်းရှီး နှင့် ရှီးကျားကျွမ်းတို့၌ ခိုးမှုကျူးလွန်သဖြင့် ချွေးတပ်စခန်းသို့ ပို့ခံရသည်။ ဟဲနန်ပြည်နယ် ကျူးမာသျန့်တွင် မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ရန် ကြံစည်သဖြင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၌ ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ချမှတ်ခံရပြီး ၁၉၉၉ တွင် ထောင်မှ လွတ်လာသည်။
ယန် ၏ လူသတ်မှုများမှာ ၁၉၉၉ နှင့် ၂၀၀၃ အကြားတွင် အန်းဟွေး ၊ ဟဲပေ ၊ ဟဲနန် နှင့် ရှန်းသုန်း ပြည်နယ်များ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ညရောက်သည့်အခါ သားကောင်များ၏ အိမ်သို့ဝင်ရောက်ပြီးလျှင် အိမ်တွင်ရှိသူမှန်သမျှအား ပုဆိန် ၊ တူ နှင့် ဂေါ်ပြားတို့ဖြင့် သတ်ပစ်လေ့ရှိရာ များသောအားဖြင့် လယ်သမားများ ဖြစ်ကြပြီး တခါတရံ တမိသားစုလုံး အသတ်ခံရသည်။ အဝတ်အစားသစ်နှင့် ကြီးမားသော ဖိနပ်များကို ဝတ်ဆင်ပြီး ကျူးလွန်လေ့ရှိသည်။
၂၀၀၂ အောက်တိုဘာတွင် ဖခင်နှင့် အသက် ၆ နှစ်အရွယ်မိန်းခလေးကို ဂေါ်ပြားဖြင့် ရိုက်သတ်ပြီး ကိုယ်ဝန်သည် အမျိုးသမီး တဦးကို မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးမှာ အသက်ရှင်ခဲ့သော်လည်း ဦးခေါင်းဒဏ်ရာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးရမိခြင်း တရားရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အဆုံးစီရင်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဟဲပေပြည်နယ် ချိန်ကျိုးရှိ ပွဲခင်းအတွင်း ရဲပတ္တရောင်လှည့်နေစဉ် သင်္ကာမကင်းမှုဖြင့် ၂၀၀၃ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်၌ အထိန်းသိမ်းခံရသည်။ မေးမြန်းစဉ် လူသတ်မှုဖြင့် ပြည်နယ် ၄ ခု၌ အလိုရှိသူ ဖြစ်နေကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ သူ၏ပြစ်မှုများနှင့် အဖမ်းဆီးခံရမှု သတင်းပြန့်နှံ့သွားသောအခါ မီဒီယာများက ၎င်းအား "မိစ္ဆာကောင်လူသတ်သမား" ဟု ပုံနှိုင်းရေးသားသည်။
အဖမ်းခံရပြီးများမကြာမီ လူသတ်မှု ၆၅ မှု ၊ မုဒိမ်းမှု ၂၃ မှုနှင့် ထိခိုက်အနာတရဖြစ်စေမှု ၅ မှုတို့အား ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံလေရာ ယင်းတို့အနက် လူသတ်မှု ၄၉ မှု ၊ မုဒိမ်းမှု ၁၇ မှု နှင့် တိုက်ခိုက်မှု ၅ မှုမှာ ဟဲနန်ပြည်နယ်၌လည်းကောင်း ၊ လူသတ်မှု ၈ မှု နှင့် မုဒိမ်းမှု ၃ မှုမှာ ဟဲပေပြည်နယ်၌လည်းကောင်း ၊ လူသတ်မှု ၆ မှု နှင့် မုဒိမ်းမှု ၂ မှုမှာ အန်းဟွေးပြည်နယ်၌လည်းကောင်း ၊ လူသတ်မှု ၂ မှုနှင့် မုဒိမ်းမှု ၁ မှာ ရှန်းသုန်းပြည်နယ်၌လည်းကောင်း အသီးသီး ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှ ဒီအဲန်အေနှင့် သူ့အား တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရာ ကိုက်ညီကြောင်း တွေ့ရသည်။ သူ့သားကောင်များအနက် ၁ ဦးထံမှ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရသည်။
၂၀၀၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ တွင် ဟဲနန်ပြည်နယ် ၊ လော့ဟယ်မြို့တော် အလတ်တန်းပြည်သူ့တရားရုံးက လူသတ်မှု ၆၇ မှုနှင့် မုဒိမ်းမှု ၂၃ မှုအတွက် ယန်တွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချပြီး သေဒဏ်ချလိုက်သည်။ စီရင်ချက်ချမှတ်သည့်အချိန်၌ တရုတ်နိုင်ငံတွင်း အရှည်ကြာဆုံးနှင့် အော့နှလုံးနာဖွယ်ရာအကောင်းဆုံး ပရမ်းပတာလူသတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံမီဒီယာများက ယုံကြည်သည်။ ၂၀၀၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ၌ သေနတ်တပ်ဖွဲ့၏ ကွပ်မျက်ခြင်းခံရသည်။
လမ်းခွဲမှုအတွက် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအား လက်စားချေတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် လူသတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဟု အချို့ မီဒီယာများက သူအဖမ်းဆီးခံရစဉ်အချိန်က သတင်းတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ယခင်ခိုးမှုနှင့်မုဒိမ်းမှုများကြောင့် သူ၏ ရည်းစားဖြစ်သူက စွန့်ခွာသွားခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ လုယက် မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်ရတာကို မွေ့လျော်ခြင်းကသာလျင် စေ့ဆော်မှုဖြစ်သည်ဟု မီဒီယာများက နောက်ပိုင်း၌ သတင်းဖော်ပြကြသည်။
ကျူးလွန်ရသည့်အကြောင်းရင်းကို ယန်း က မည်သည့်အခါမျှ ထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်း အောက်ပါအတိုင်း ပြောခဲ့ဖူးသည်ဟု ကိုးကားကြသည် -
"ငါလူသတ်တဲ့အခါ ဆန္ဒပြင်းပြလာ ၊ ဒီအတွက်ပဲ ပိုသတ်မိတာ ၊ သူတို့ အသက်ရှင်သင့်သလား ဘာလား ငါအမှုမထား ၊ ငါ့အလုပ်မဟုတ်….လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ငါမနေလို။ လူ့အသိုင်းဝိုင်းဟာ ငါ့အတွက် အရေးအရာမဟုတ်"
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၁၉ ၊ ကော်ကျွမ်းရွာ ၊ ပေကျောင်းမြို့နယ် ၊ ချွမ်းဟွေခရိုင် ၊ ကျိုးကို့ ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၂ မှု။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ၊ ချွင်းရှုကျွမ်း ၊ ရှောင်ယင်းရွာ ၊ ဝမ်သျန့်မြို့ ၊ ယင်ကျိုးခရိုင် ၊ ဖုယန် ၊ အန်ဟွေးပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၃ မှုနှင့် မုဒိမ်းမှု ၁ မှု။
၂၀၀၁ ဩဂုတ် ၁၅ ၊ ဖန်းချယ်လျို့ရွာ ၊ ကျုလင်မြို့နယ် ၊ လင်းယင်ကောင်တီ ၊ လော့ဟယ် ၊ ကျိုးကို့ ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၃ မှုနှင့် မုဒိမ်းမှု ၁ မှု။
၂၀၀၁ ဆောင်းဦး ၊ ကန်းလိုမြို့နယ် ၊ ရှီးဟွာကောင်တီ ၊ ကျိုးကို့ ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၂ မှု။
၂၀၀၁ ဆောင်းရာသီ ၊ ယဲ့ကောင်တီ၏ မြို့မှ အရှေ့တောင်အရပ်ရှိ ရွာ ၊ ဖင်းသင်းရှန်း ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၂ မှု။
၂၀၀၂ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ၊ ထုံးရွှိကောင်တီ ၊ ခိုင်ဖုန်း ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၃ မှုနှင့် မုဒိမ်းမှု ၁ မှု။
၂၀၀၂ ဇွန် ၃၀ ၊ ချိုင်ကန်းမြို့နယ် ၊ ဖူကို့ကောင်တီ ၊ ကျိုးကို့ ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၄ မှုနှင့် မုဒိမ်းမှု ၁ မှု။
၂၀၀၂ ဇူလိုင် ၂၈ ၊ သွန်းကျိုး ၊ နန်းယန် ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၄ မှုနှင့် မုဒိမ်းမှု ၂ မှု။
၂၀၀၂ အောက်တိုဘာ ၂၂ ၊ ကျိုက်ဟူရွာ ၊ ဆုန်းကျီမြို့နယ်၊ ရှီးဖင်ကောင်တီ ၊ ကျူးမာသျန့် ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၂ မှု ၊ မုဒိမ်းမှု ၁ မှုနှင့် အပြင်းအထန်နာကျင်စေမှု ၁ မှု။
၂၀၀၂ နိုဝင်ဘာ ၈ ၊ ကောင်းလီရွာ ၊ ရှောက်သျန့်မြို့နယ် ၊ ရှန်းချိုင်ကောင်တီ ၊ ကျူးမာသျန့် ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၄ မှု ၊ မုဒိမ်းမှု ၂ မှုနှင့် အပြင်းအထန်နာကျင်စေမှု ၁ မှု။
၂၀၀၂ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ၊ လျှို့ကျွမ်းရွာ ၊ ကျန်းရှီးမြို့ ၊ ဝေးရှစ်ကောင်တီ ၊ ခိုင်ဖုန်း ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၂ မှုနှင့် မုဒိမ်းမှု ၁ မှု။
၂၀၀၂ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၊ ရှီးကွိုင်ရွာ ၊ ဝမ်းမွန့်မြို့နယ် ၊ လင်းယင်ကောင်တီ ၊ လော့ဟယ် ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၂ မှု။
၂၀၀၂ ဒီဇင်ဘာ ၁ ၊ ရန်းဝမ်ရွာ ၊ ဝမ်ဖိလျှိုမြို့ ၊ လုယီကောင်တီ ၊ ကျိုးကို့ ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၂ မှု ၊ မုဒိမ်းမှု ၁ မှု နှင့် အပြင်းအထန်နာကျင်စေမှု ၁ မှု။
၂၀၀၂ ဒီဇင်ဘာ ၆ ၊ လျှို့ကျွမ်းရွာ ၊ ရန်းဟဲမြို့နယ် ၊ ရှီးဖင်ကောင်တီ ၊ ကျူးမာသျန့် ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၅ မှု နှင့် မုဒိမ်းမှု ၁ မှု။
၂၀၀၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ၊ စစ်ကျားရွာ ၊ မာလန်မြို့နယ်၊ ယန်းလင်ကောင်တီ ၊ ရွှိချန်း ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၂ မှု။
၂၀၀၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ၊ ရှောက်လိကျွမ်း ၊ မြောင်ချာမြို့ ၊ လင်ချွမ်းကောင်တီ ၊ ဖုယန်း ၊ အန်းဟွေပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၃ မှု နှင့် မုဒိမ်းမှု ၁ မှု။
၂၀၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် ၊ ကုကျွမ်းမြို့နယ် ၊ ရှန်းချွန်ကောင်တီ ၊ ရွှိချန် ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၃ မှု ၊ မုဒိမ်းမှု ၁ မှု နှင့် အပြင်းအထန်နာကျင်စေမှု ၁ မှု။
၂၀၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၊ ချီယင်းမြို့နယ် ၊ ရှီးဟွာကောင်တီ ၊ ကျို့ကို ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၄ မှု နှင့် မုဒိမ်းမှု ၂ မှု။
၂၀၀၃ မတ် ၂၃ ၊ ချွန်းကွမ်မြို့ ၊ မင်းချွမ်ကောင်တီ ၊ ရှန်းချို ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၄ မှု နှင့် မုဒိမ်းမှု ၁ မှု။
၂၀၀၃ ဧပြီ ၂ ၊ ဆန်းလိကျိုင်းရွာ ၊ ထောင်းယွမ်မြို့ ၊ ချောင်းကောင်တီ ၊ ဟဲကျယ် ၊ ရှန်းတုန်းပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၂ မှု။
၂၀၀၃ ဩဂုတ် ၅ ၊ ဟဲပေပြည်နယ် ၊ ရှင်းထိုင် ၊ လီသောင်ရွာ။ လူသတ်မှု ၃ မှု။
၂၀၀၃ ဩဂုတ် ၈ ၊ သုန်းလျန်ရှန်းရွာ ၊ ချောင်းရှီခရိုင် ၊ ရှိကျားကျွမ်း ၊ ဟဲပေပြည်နယ်။ လူသတ်မှု ၅ မှု။
စုစုပေါင်း - အမှုအခင်း ၂၆ ခု ၊ လူသတ်မှု ၆၇ မှု ၊ မုဒိမ်းမှု ၂၃ မှု ၊ တမင်ရည်ရွယ်နာကျင်စေမှု ၁၀ မှု
သားကောင်အရေအတွက်အလိုက် ကွင်းဆက်လူသတ်သမားများ စာရင်း
နိုင်ငံအလိုက် ကွင်းဆက်လူသတ်သမားများ စာရင်း
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ "Man arrested over serial murders of 65 people"၊ China Daily၊ 2003-11-18။ 2008-09-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2008-10-12။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ "Man arrested on suspicion of killing 67 people in China"၊ ABC News၊ 2003-11-15။ 2008-09-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2009-02-12။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ Cui၊ Vivian။ "Using hammer, shovel or axe, serial killer of 65 struck victims as they slept Yang Xinhai's motives were rape and robbery, police say of four-province rampage."၊ South China Morning Post၊ 2003-11-22။ 2008-09-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2009-01-12။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ Liu၊ Li။ "Man faces death after killing 67"၊ China Daily၊ 2004-02-02။ 2008-09-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2009-02-12။
↑ "Drifter says he killed 65 people with axes, shovels"၊ Taipei Times၊ 2003-11-22၊ pp. 5။ 2008-09-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2009-02-12။
↑ "China executes murderer of 67"၊ Rediff India Abroad၊ 2004-02-14။ 2008-09-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2009-02-12။
↑ "Chinese 'serial killer' confesses"၊ BBC News၊ 2003-11-21။ 2008-09-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2012-08-04။
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ "Chinese serial killer gets death sentence for slaying 67"၊ Asian Political News၊ 2004-02-09။ 2008-09-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2009-02-12။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ ၉.၃ "Chinese 'serial killer' arrested"၊ BBC News၊ 2003-11-15။ 2008-09-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2008-12-19။
↑ "Police arrest man for murder of 25 students in China"၊ Taipei Times၊ 2003-11-17။ 2008-09-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2009-02-12။
↑ "Man who killed 67 people executed"၊ China Daily၊ 2004-02-14။ 2008-09-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2009-02-12။
↑ Taylor၊ John။ "Suspected serial killer in China arrested"၊ ABC၊ 2003-11-17။ 2008-09-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2008-06-16။
↑ Forney၊ Matthew။ "MakingaKilling in China"၊ TIME၊ 2003-11-17။ 2008-09-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2008-05-01။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ ၁၄.၂ ၁၄.၃ ၁၄.၄ "China executes mass murderer"၊ BBC News၊ 2004-02-14။ 2008-09-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2004-06-07။
↑ "Ex-convict sentenced to death for murder of 67"၊ Sydney Morning Herald၊ 2004-02-02။ 2008-09-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2009-02-12။
↑ "Serial killer executed"၊ Taipei Times၊ 2004-02-15။ 2008-09-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2009-02-12။
↑ "Killer of 67 executed"၊ Sunday Mirror၊ 2004-02-15။ 2008-09-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2009-02-12။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယန်_ရှင်းဟိုင်&oldid=476941" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၅:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။